Umshicileli wasedongeni: Isisombululo esishicilelweyo esithe nkqo kwiindonga zangaphakathi okanye zangaphandle | Martech Zone
NgoLwesine, uJuni 3, 2021 NgoLwesine, uJuni 3, 2021 Douglas Karr
Ndinomhlobo wam oyila kunye nepeyinti eludongeni kwaye wenza umsebenzi omangalisayo. Ngelixa obu bugcisa botyalo-mali olungenakuguqulwa obunokuguqula indawo yokusebenza okanye indawo yokuthengisa, ukubanakho ukuyila kunye nokupeyinta umzobo ochanekileyo kwindawo ethe nkqo ubukhulu becala wawushiywe ukuba ugqibe ukufakwa okanye ukuhanjiswa kwegcisa. Itekhnoloji entsha yokushicilela ivelile ezakuguqula oku, nangona… nkqo abashicileli eludongeni.
Itekhnoloji yokushicilela ethe nkqo yeWall Printer ivumela ukupeyinta ngombane kweefayile ezinkulu zedijithali zeefoto, ubugcisa, imizobo, okanye imiqondiso yokubhaliweyo kuwo nawuphi na umphandle okanye umphandle. Oomatshini babo bayilelwe ukuba baprinte kwiindawo ezininzi kubandakanya udaka, itafile, iglasi, intsimbi, izitena, ikhonkrithi, ivinyl kunye neenkuni.
Kwisithuba esingaphantsi kweminyaka emibini, iThe Wall Printer sele ithengisile oomatshini bayo ngaphezulu kwamashishini angama-40 kulo lonke elaseMantla nase Mzantsi Melika, nase UK. Abaprinta abathe nkqo banikezela ngeendlela ezingenakubalwa zokuyila, ezisebenzayo, kunye nezolisayo eziguqulela kumathuba oshishino lokwenyani lweenkampani kunye noosomashishini abazamkelayo.
Jonga ukuba abanye abathengi basebenzisa njani okanye baceba ukusebenzisa oomatshini:
Omnye osasaza eFlorida, iMiArte eNaples FL, emva kokushicilela i-5'x 8 'yomzobo wabo kunye nokuthumela iifoto kuFacebook uthi, "Simangalisiwe yimpendulo. ingathi abantu bebelilindele eli thuba. ” Umthengi omnye waphendula kwaye wenza isivumelwano nale Wall Printer ukuba aprinte ii-8 'square murals kwibhodi eludongeni, eyathi emva koko yafakwa eluphahleni, yakha udonga lobugcisa.
Isebe lezemidlalo eliphambili le-D1 lijonge ukuthenga umatshini we-TWP oza kusetyenziswa kwimiboniso kwibhola ekhatywayo, kwibhasikithi nakwezinye iindawo zemidlalo nakwiminyhadala, nakwiindonga zezakhiwo zemidlalo, ngaphambi kwemidlalo emikhulu yasekhaya.
Abahlobisi bangaphakathi bathenga oomatshini ukunceda ngokudibanisa imiboniso yezinto abazithandayo zabaxumi okanye iimfuno zobugcisa bodonga kwindawo yokuhlala neyorhwebo kunye neendawo zokusebenza.
Ibali lomshicileli wodonga
Njengosomashishini osisigxina uPaul Baron wayefuna into enkulu elandelayo, wafumana umbono omtsha: ukushicilela nkqo. Kwakuyimbono entsha eMelika kodwa yaziwa iminyaka kwiAsia, India, Middle East naseYurophu. Uluvo lokupeyinta ngaphakathi kunye nangaphandle kwimizobo engabizi kakhulu kubazobi kunye nabanini bezakhiwo babhenele kuye. Ukuprintwa eludongeni lwayo nayiphi na into esemhlabeni, ngokuthembekileyo nangokuchanekileyo, kuye kwabhenela kuye.
Emva kokujonga nzima kubavelisi abambalwa ababonelela ngobu buchwephesha, ngo-2019 uPaul wagqiba isivumelwano kunye nomdala kunye nomenzi ophambili eAsia. Wabakhetha, watsho, kuba ixabiso kunye nenqaku lamaxabiso zidityaniswe kakuhle nomgangatho woyilo kunye nendibano, kunye nenkxaso ukuze bakwazi ukukala ukuhlangabezana neemfuno zeemarike zaseMantla nase Mzantsi Melika.
Ukusukela ngoko inkampani ithengise ukuhanjiswa kweentengiso ngaphezulu kweemarike ezingama-20 kwaye yanceda ukuseka amashishini amatsha kwilizwekazi laseMelika naseKhanada, eMzantsi Melika, e-UK nasePuerto Rico. Bamema abathengi abatsha ukuba bafunde malunga nokuPrinta kweWall kunye nethuba elinyanzelisayo loshishini eliyibonisayo.
I-Wall Printer iya kwanda kulo lonke elaseMantla nase Mzantsi Melika, i-UK, kunye neCaribbean ngokukhawuleza kule minyaka imbalwa izayo. Njengoko amashishini okushicilela eludongeni ekhula, inkampani iya kubaxhasa ngezisombululo ezibonakalayo, ii-inki, iinxalenye, inkonzo ebalaseleyo, kunye nentengiso yokwandisa iinkonzo zabo zokuPrinta iWall ekuhlaleni.
Ngelixa itekhnoloji emva kokushicilela nkqo isetyenzisiwe kumazwe aphesheya kangangeminyaka ethile ngoku iyafumaneka kumashishini kuwo wonke uMntla noMzantsi Merika.
UPaul Baron, u-CEO weWall Printing USA
Izimvo ezintsha ziyaqhubeka ukuvela kwiiPrinta zabo zokushicilela njengoko abathengi becela ubugcisa bedijithali kwiindonga zohlobo ngalunye, ngaphakathi nangaphandle.
Funda ngakumbi malunga neWall Printer
tags: ukuprinta eludongenizimbumbaumshicileli waseludongeniushicilelo nkqoudonga olujikelezayoumshicileli wodonga